KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Kooxda Al-Shabaab “Sargaalkii Faransiiska wuu noolyahay”
Saturday 12 January 2013 13:27
Kooxda Al-Shabaab “Sargaalkii Faransiiska wuu noolyahay”
Muqdisho (KON) Al-Shabaab ayaa ka hadlay weerarkii ka dhacay degmada Buula-mareer ee gobalka Shabeelaha Hoose.
Bayaan ay soo saareen kooxdaan ayaa waxay ku sheegeen wali in uu noolyahay sargaalkii u dhashay wadanka Faransiiska oo ay haayaan.
Bayaankaan oo Al-Shabaab ay soo dhigeen Boga ay ku leeyihiin twitter ayaa sidoo kale waxay ku sheegeen in ay haatan haayaan askar Faransiis ah oo dhaawac uu soo gaaray.
Warbaahinta Dalka Fransiiska ayaa Saakay shaaciyeen in Laheestaha Faransiiska Denis Allex lagu dilay Weerarkii lagu doonayay in lagu soo furto Sarkaalkaan.
Wixii ku soo kordhaa Warkaan kala soco Keydmedia.net